IPL SHR Elight RF သည်
Diode လေဆာ+ YAG
Velashape Kshape ဖြစ်သည်
Q-nd nd yag လေဆာပြောင်းပါ
RBS ကုသမှုစနစ် KEY-333
အသေးစားအပ်နဖီး RF key-111
Fractional CO2 လေဆာ
40W K106 ဖြစ်သည်
60W K106+ ဖြစ်သည်
IPL/ OPT/ DPL/ KPL/ BBL ဆိုတာဘာလဲ။
IPL/OPT/DPL/BBL ဆိုတာဘာလဲ။ Photorejuvenation သည်ဆေးဗေဒအတွက်အတော်လေးမူလတန်းမိတ်ဆက်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ က်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ အသားကိုဖြူစေခြင်း၊ အနီရောင်အစင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအသားအရေကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလူတိုင်းကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်။ သို့သော်လည်းတိုးတက်မြန်ဆန်လာသည်နှင့်အမျှ ...
HIFU ကုသမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ HIFU သည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
မြင့်မားသောပြင်းထန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုအာထရာဆောင်းကုသမှု (သို့) HIFU ကုသမှုအတိုအစသည်မျက်နှာအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုမထိခိုက်စေသောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ခွဲစိတ်ရန်မလိုဘဲအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပေးသောအသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုဆန့်ကျင်သောကုသမှုများအတွက်တိုးတက်နေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ HIFU သည်အလှပြင်ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမေးအဖြေများ - လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း
အမေးအဖြေများ - လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း ၁။ IPL ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ IPL နှင့်လေဆာကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ၂။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ၃။ ဘာကြောင့် Laser Hair Removal ကိုသွားသင့်တာလဲ။ ၄။ လေဆာကုသမှုအပိုင်း၌ဘာကိုမျှော်လင့်သနည်း။ ၅။ ကုသမှုအပိုင်းမည်မျှလိုအပ်သနည်း။ ၆။ ကုသမှုတစ်ခုစီသည်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။ 7. ဘယ်လိုလဲ ...
IPL, DPL & SHR ကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
IPL (ပြင်းထန်သော Pulsed light) IPL သည်အလင်းရောင်ကိုကုသရန်ပဲမျိုးစုံအဖြစ်သုံးသောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆံပင်အစိတ်အပိုင်းများကိုကုသသောအခါဆံပင်သည်ထုတ်လွှတ်သောအလင်းကိုစုပ် ယူ၍ စုပ်ယူသောအလင်းသည်အပူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးဆံပင်၏ကြီးထွားမှုနှင့် melanin ပါဝင်မှုကိုတားဆီးပေးသည်။ DPL (Dynamic Pu ...
သင်အိမ်တွင်လေဆာဖြင့်ဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားနေသလားဟုသင်တွေးနေပါသလား။ မင်းက hype ကိုကြားဖူးပြီး rave review တွေကိုမြင်ဖူးမှာသေချာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တာရှည်ခံတဲ့ချောမွေ့တဲ့ရလဒ်ကိုကတိပေးထားတာကြောင့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာမလုံမခြုံခြေထောက်များ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း၊ စျေးကြီးသောအလှပြင်ဆိုင်သို့ပင့်တင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောဖျန်းဖျက်နှိပ်စက်ခြင်းများကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Zappi မစခင် ...
ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? VelaShape III သည် IR (အနီအောက်ရောင်ခြည်)၊ Bi-Polar RF (ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း) နှင့် pulse vacuum နှင့် massage rollers တို့အပါအဝင်ကွဲပြားသောနည်းပညာလေးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ရန်တစ်ခုတည်းသော non-invasive body shaping product ဖြစ်သည်။ IR နှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းစပ်ထားသော RF t ...
Nd Yag လေဆာမတိုင်မီကလေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားခြင်းသည်ပိုနက်သောအသားအရေအမျိုးအစားများအတွက်မလုံခြုံပါ။ ဒီအကြောင်းအရင်းနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲကြည့်ရအောင်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသားအရေအရောင်များတွင် melanin ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်အချို့သောလေဆာများနှင့် IPL သည်ဆံပင်နှင့်ကြွယ်ဝသော melanin အသားအရောင်ကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် N ...
Cryolipolysis- နာကျင်မှုမရှိ၊ ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်နှင့်ကုသမှုများသည်အသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သင့်တော်သည်
၁။ လက်ကိုင် ၄ ချက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပါ ၂။ အစားအစာအဆင့်နူးညံ့သောဆီလီကာဂျယ်ကွေး၊ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှု ၃။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆန်ခါ ၄ င်းထက်ပိုသောအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများဖြင့်အဆုံးစွန်ထိတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဒုက္ခကိုရွေးချယ်ပြီးပစ်မှတ်ထားတယ်။
Velashape Kshape ၏အားသာချက်များ
Velashape ကိုလုံးပတ်လျှော့ချခြင်း၊ cellulite လျှော့ချခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းနှင့်အသားတင်းခြင်းအတွက်သုံးသည်။ အောက်ပါတို့သည်စက်၏အားသာချက်အချို့ဖြစ်သည်။ 1. RF+ IR+ Vacuum+ Massage roller 2. Velashape3နှင့်ဆင်တူ။ RF ပါဝါသည် 150W ရှိပြီးကြိမ်နှုန်းသည် 40.68MHZ 3. အချိန်နှင့်တပြေးညီအရေပြားအပူချိန်ရှိသည်။
HIFU ဆိုတာဘာလဲ။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိသောထိုးဖောက်ကုသမှုနည်းလမ်း
HIFU ဆိုတာဘာလဲ။ ဆန်းသစ်မှုမရှိသောထိုးဖောက်ကုသမှုနည်း HIFU (high-intensity focused ultrasound) ကုသမှုသည်ခွဲစိတ်ရန်တစ်ခုတည်းသောမထိုးဖောက်နိုင်သောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်မှုမရှိ၊ သွေးဆုံးရှုံးမှုမရှိ၊ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မရှိပါ။ ဤနည်းပညာသည်တိကျသောထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်သောအာထရာဆောင်းကိုအသုံးပြုသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဆဲလ်များစွာသေစေသောကွဲပြားသောယန္တရားများ (apoptosis သို့မဟုတ်အဆီဆဲလ်များ၏ necrosis) ကိုဖြစ်စေသောနည်းလမ်းများစွာကိုအခြေခံသည်။ ဤနည်းလမ်းများထဲမှ cryolipolysis ကိုအများပြည်သူတို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ အလှအပရေးရာနယ်ပယ်အများစုကဲ့သို့ထောက်ပံ့ပေးသောလေ့လာမှုများစွာရှိပါသည်။
VCSEL လေဆာ-Vertical-cavity Surface-emitting Laser VCSEL သီအိုရီဒေါင်လိုက်ထုတ်လွှတ်သောမျက်နှာပြင် (သို့မဟုတ်) VCSEL သည်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်မှလေဆာရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူ semiconductor laser diode အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ ...
WhatsApp/Wechat: ၀၀၈၆ ၁၈၅၁၆၉၅၈၉၁၃
WhatsApp/Wechat: ၀၀၈၆ ၁၈၆၁၁၉၂၀၁၅၆
ခေါ်ပါ။ ၀၀၈၆ ၁၈၅၁၆၉၅၈၉၁၃
ခေါ်ပါ။ ၀၀၈၆ ၁၈၆၁၁၉၂၀၁၅၆
A-313 စက်မှုဥယျာဉ် Yongxing လမ်း၊ ဇီဝဆေးဝါးဆေးဝါးအခြေခံ၊ ပေကျင်း Daxing ခရိုင်၊ ပေကျင်း၊ တရုတ်။